I-Cameroon Inombolo Yefoni | Shayela Izinhlu Zezingcingo | Database lakamuva Lokuposa
I-Cameroon Inombolo Yefoni
Database lakamuva Lokuposa » I-Cameroon Inombolo Yefoni
I-Cameroon Ucingo Izinombolo
Uhlu lwezinombolo zocingo eCameroon lunenombolo evumelana nomthengi yabantu yocingo / inombolo yeselula kuleli. Uma ubheka I-Cameroon Inombolo Yefoni womkhankaso wakho obhekiswe ngocingo. Sinabathengi abasezingeni eliphakeme I-Cameroon Inombolo Yezinombolo, Izinhlu Zenombolo Yeselula. Database lakamuva Lokuposa Ukunikeza ukuhanjiswa kwefoni okusha okuvuselelwa kwezentengiso okuphumelele kwebhizinisi.
Ithimba lethu lochwepheshe liqoqa ikhasimende elilungile b2c ifoni alukho uhlu ukufaka igama lokuqala, igama lokugcina, okokuqala, ikheli lomgwaqo, ikhodi ye-zip, isimo kanye neqiniso, inombolo yocingo. Futhi, ungenza noma ikuphi i-oda yangokwezifiso nathi lezindawo ezihlosiwe noma izigaba. Manje hamba ukwengeza kunqola yenqola bese uthenge umkhankaso wethu wokuqalisa we-SMS omkhulu noma umkhankaso wokuhlaziya umbhalo.
Thenga uhlu lwabasebenzisi beCameroon laseCameroon
Uhlu Lwezingcingo Lwabasebenzisi BaseCameroon
I-Database yakamuva Yokuposa noma i-latestdatabase.com ingumthombo wohlu lwenombolo yefoni yabathengi beCameroon yangempela. Inikeza ukunemba kwemininingwane engu-95%, okuqinisekisiwe futhi okuqoqwe ngabasebenzi bethu okuqoqiwe kusuka kumasayithi athembekile kanye nesikhulumi sikhetha uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi, uhlu lweselula, igama, ikheli, izwe nekhodi ye-zip.
Uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi baseCameroon, luwunombolo yocingo olunembile kunazo zonke futhi olubukeziwe nohlu lweselula olungakuholela ekuthengeni okuhle nasekusebenziseni izingcingo, ukumaketha kwe-sms kanye nemikhankaso yokubiza amakhaza. Ukuqinisekisa ukuthuthuka kwebhizinisi lakho, ukumaketha okusebenzayo okusebenzayo kakhulu nokucacile noma ngokuqondile kumakhasimende akho alindelwe.
Uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi baseCamalia oluvela kuDatha Yokugcina Yama-imeyli equkethe imininingwane yokuqoqeka yezinombolo zocingo yabathengi engaba ngu- $ 5,000 kungukukhokha ngesikhashana esithile kanye nesoftware engalandelwa engaba uhlobo lwefayela le-Excel CSV futhi ingaphrintwa kalula ekhasini lakho ideskithophu.
Idathabheki Yokugcina Imeyili inikezela ngohlu lwezinombolo zocingo oluqinisekiswe kakhulu futhi oluvuselelwe ukuvusa umkhankaso wokuthengisa ngocingo. Ukuthenga uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi baseCameroon kusuka eDatabase Lokumema Kamuva kuyindlela ehlakaniphile kakhulu yokuqalisa ibhizinisi lakho njengoba ungabona ukuthuthuka kwebhizinisi lakho, kusebenza kwiklayenti futhi kulungele ukufinyelela umamukeli wakho wethemba lokuthengisa izingcingo.
ICameroon Inombolo Yefoni Umbuzo & Impendulo